Summer zokupheka: indlela yokwenza ice cream ekhaya?
Sinini ukushisa kwehlobo, awukudla cool, intandokazi kusukela ebuntwaneni, ngifuna abaningi. Yiqiniso, ungase nje ukuthenga ezejwayelekile ice cream esitolo, kodwa ukulungiselela ice cream ne izandla zakho, kodwa kuyathakazelisa okuningi. inqubo enjalo ingabangela kalula abe isiko lomkhaya omusha ezinyangeni zasehlobo. Ngakho, indlela yokwenza ice cream ekhaya? It is, eqinisweni, akunzima kangako!
Ulungiselela -ayisikhilimu ekhaya libhekene izinzuzo ezithile. Okokuqala, kule dessert ngeke kusaba khona nezivimbelakuvunda chemical, ngoba wena ngokwakho unqume ukuthi lungeze, bese ulandela yonke inqubo ukulungiselela. Lokhu kusho ukuthi ngisho namanye amalungu elincane lomkhaya ungakwazi ukujabulela ngaphandle kokwesaba dessert eqandisiwe.
Okwesibili, ungakwazi ukupheka nganoma isiphi isikhathi futhi kunoma iyiphi ubukhulu. Ukuze zilungisa indlela yokwenza ice cream ekhaya ngaphambili you realize konke kuba - fun and inqubo lula lapho ukwazi ukuveza imizwa nemicabango yabo futhi lokusungula ngendlela ofuna. Akuthintayo izingane ukupheka - umphumela lokhu ngeke kubonakale tastier kokubili abadala kanye nezingane.
Zikhona izindlela eziyinkimbinkimbi okudinga izinga elithile amakhono Culinary, kodwa ungasebenzisa futhi elula - ngokuvamile angithi ziphansi ukunambitha okujabulisa. Ngokwemibiko ye-iresiphi elula ngaphambi ukulungiselela ice cream ekhaya, kuphela ukuze uthole ngempela mixer futhi efrijini. Yiqiniso, uma kukhona idivayisi ekhethekile ngokwenza Gelato (okubizwa ngokuthi u-ice cream) kuyophumelela ngisho kulula, kodwa futhi ngobuciko kuyoba isikhala okuncane kakhulu.
Ingqikithi yalo okuzenzela ice cream iwukuba kahle uhlanganise futhi ubuyisele zonke izithako, kamuva uzobe iqandiswe efrijini. Ungakwazi ukulungiselela okuzenzela ice cream ngesimo ikhekhe elikhulu, noma ungakwazi apheke awukudla la Carte (njengaku ikhekhe okuzikhulula, kanye isikhunta ekhethekile ngezinduku like esitolo popsicle).
Ukunambitheka dessert yakho kungaba yini. Makube engavamile noma ephistakhiyo creme brulee. Noma mhlawumbe uthanda izithelo noma yobisi? Imingcele kuchazwa kuphela ukunambitheka okuthandayo. Emva iqhwa abakulungiselweyo, kungenzeka ukulungiselela ezihlukahlukene izithasiselo nalokho. Ikhukhi imvuthu noma ushokoledi ogayiwe, amantongomane ochotshoziwe noma caramel usawoti (konke kuhlangene futhi ibhekwa ngalunye ngokuhlukile) - okuningi ongakhetha, kanye iningi ice cream flavour. Ukupheka izithasiselo ngokuhlukile ayisikhilimu elula ngoba okuthandwa yombusi bahlanganisa amalungu omkhaya kungenzeka okufanayo, nokuba nokuzikhethela ngenkululeko, wonke umuntu uyokwazi ukwenza lokhu nje uju, okuyinto ukunambitheka kwakhe. Uma sijwayelana konke kusengaphambili, ungatholi ukukhetha. Nakuba kukhona usazovele esiphundu, lokhu akungabazeki.
Cabanga indlela elula kanjani ukulungiselela ice cream ekhaya. Ukuze wenze lokhu, udinga ukhilimu nge iphesenti eliphezulu amafutha, ezinoshukela ubisi olujiyile ne oncibilikile. Whip ukhilimu 600 namamililitha 400 amagremu ubisi ayahwamuka nge mixer. Uma usebenzisa ubisi olunamafutha amancane noma ukhilimu, akusho isisindo vzobetsya ukuba kuphele ukuzidla edingekayo, njengoba ukungaguquguquki akukalungi kahle okufunayo, ngakho ukhilimu kufanele njalo kube u-33%. Ngemva kwalokho, ancibilike ushokoledi ibha futhi kancane engeza ukuxubana. Hlanganisa kahle futhi uthumele efrijini - ungakwazi ukujabulela obupholile kungakapheli amahora amathathu.
Iresiphi kagogo kashizi Casserole nge omisiwe.
Indlela ukupheka bhisikidi raisin: zokupheka elula
Caramel ikhekhe: ikakhulukazi ukupheka, izindlela kanye nezincomo
Uhlelo excretory zezinhlanzi: izici, lokuphatselene nesakhiwo nemsebenti. Yini emizimbeni yakha uhlelo excretory senhlanzi?
Iphupho kudide: yini uyaphupha ikhabe
Amakhukhi "Bagels" - iresiphi ngesithombe
Ikhukhamba ne inyama e-Korean - esihlwabusayo kakhulu futhi isidlo enempilo
Setha i-router WiFi ngezandla zabo
Amandla Dual - kuba isimo alinganayo amagatsha amabili uhulumeni